Unobizo lokusiza umphakathi | News24
Unobizo lokusiza umphakathi
UMnuz Sbusiso Nzama oyilungu lenhlangano i-R2K ehambisana noMnuz Jabulani Nzama oyi-Community Care Giver.ISITHOMBE: sithunyelwe
OWESILISA waKwaNyuswa uMnuz Jabulani ‘Mjay’ Nzama, onothando lokusiza abantu emphakathini uthe umsebenzi awenzayo wokuba yi-Community Care Giver uwubizo lwakhe.
Uthe: “Lo msebenzi engiwenzayo wokuba yi-Community Care Giver ngiwubona uwubizo lwami ngoba bonke abantu engibasizayo emphakathini bahlezi bencoma indlela engibasiza ngayo, yize zikhona izingqinamba engibhekana nazo kepha ngenxa yothando lokusebenza nabantu kuvele kube lula konke.”
UMnuz Nzama uqale ukufunda amabanga aphansi KwaMnamatha Primary School wawaqeda eSt Lawrence Primary School wadlulela eSiyajabula High School. Emva kokuba ephothule umatikuletsheni kuningi akufundile kusukela ezifundweni ze-plumbing kuya ezifundweni ze-HIV/Aids.
Uthe: “Emva kokuba ngiphothule umatikuletsheni ngenze umsebenzi we-plumbing. Ngiphinde ngenza izifundo ze-HIV and Aids, eze-Home Based Care, eze-TB kanye nezifundo ze-First Aid. Ngo -2006 ngiqale ngokuba yi-volontiya ngaphansi kwe-Community Care Giver. Okuhle wukuthi ngo-2010 ngaqashwa ngokusemthetweni ngaphansi kwawo lomkhakha emtholampilo owaziwa ngokuthi yi-Halley Stott Clinic .”
UChaze kabanzi ngokuba yi-Community Care Giver wathi:
“Kuningi okwenziwa yi-Community Care Giver emphakathini kubalwa ukuqwashisa umphakathi ngezifo ezehlukene, ukunciphisa izinga lobubha ngokunika abantu ithemba emhakathini, ukugqugquzela abantu abadla imishwanguzo ngokuba nikeza ithemba lokuthi lemishwanguzo iyalekelela ekutheni inciphise amandla esifo emzimbeni nokuthi uma abantu bedla imishwanguzo ngendlela efanele bephinde bedle ukudla okunempilo, lingehla izinga labantu abashonayo futhi nempilo yabo ingahlale iyinhle,” kusho uMnuz Nzama.
Uthe kulo msebenzi usebenzisana neminyango ehlukahlukene ukuze kuqinisekiseke ukuthi msebenzi wenzeka ngendlala efanele. “Kulo msebenzi ngibambisene kakhulu nabantu bomphakathi kanye nezinhlaka ezahlukene kubalwa amakhansela nabanye ukuze kuqinisekiseke ukuthi sikhankasa ezokuphepha emphakathini nokuvikeleka kwabantu ezifweni ezithelelanayo ,” kusho yena.
Uthe akukho akuthanda kakhulu njengokubona abantu bethuthuka emphakathini futhi beziqhelelanisa nezinto ezingalungile. Uthe: “Ngihlezi ngigqugquzela umphakathi ukuthi uthande ukufunda nokuthi uzifundise ukuzivikela ezifweni ezithelelanayo nokwehlisa izinga lentsha elisebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni.
“Kubalulekile ukuthi sizihloniphe futhi kubalulekile ukuthi sizithande sigqoke ngendlela efanelekileyo uma siyintsha ngoba kwesinye isikhathi iyona eyenza sizithole sisenkingeni. Kumele intsha yazi ukuthi imfundo iyo ebalulekile kakhulu ngaphezu kwezinto zonke.”
Uthe isifiso sakhe wukuthi abe umsizi wezempilo wesilisa (male nurse) ngenxa yolwazi asenalo ekusebenzeni kulo mkhakha wezempilo.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngomsebenzi we-Community Care Giver noma uma udinga usizo ngokuchazeleka ngezifo ezithile ungashayela inombolo ethi: 062 699 6432.